vendredi, 19 février 2016 08:32
Sambava : Kiôska ho an'ny Tanora avy amin’ny Firenena Mikambana lasa toerana fifohana zavamahadomelina
Kiôska fanomezana avy amin’ny Firenena Mikambana ho an'ny Tanora eto Sambava dia lasa fialokalofan’ireo mpidoroka zavamahadomelina, ary ireto farany no manakorontana ny tontolon’ny fampianarana ao amin’ny EPP sy ny CEG Antanifotsy ka nampitaraina ireo mpanabe amin’ireto sekoly ireto fa rehefa tenenina izy ireo dia avo vava ka matahotra ny mpampianatra sao andrasan’ireto rehefa mody.
jeudi, 18 février 2016 21:51
Faritr'Isotry : Fandriampahalemana tsy misy
Mitaraina ny mponina eny amin’ny faritr’Isotry sy ny manodidina fa dia manararaotra ireo mpitandro ny filaminana izay manao fisavana tsy ara-dalana amin’ny fiara sy ireo moto ary ny olona izay sendra ireto mpitandro ny filaminana ireto.
Fetin'ny sekoly Farafangana
jeudi, 18 février 2016 21:09
Farafangana : Niavaka ny fanokafana ny Andron’ny sekoly
Karnavaly nihodidina ny tanàna ka nifarana tao amin’ny kianja filalaovam-baolina no nanombohana ny fankalazana ny andron’ny sekoly tao Farafangana ny marain’ny alarobia 17 febroary.
jeudi, 18 février 2016 07:55
Faritra SAVA : Mirongatra ny aretina ambalavelona
Ankizivavy no tena lasibatr’io aretin’ny maizina io. Misy 14 amin'izao ireo mizaka tsy fidiny any amin'ny ZAP Tanambao Daoud. Niitatra any Antalaha koa izao ny ambalavelona ka maro ireo CEG ahitana azy io, toy ny CEG Ampohibe, Santaha, Ambondrona ary Maherifody.
jeudi, 18 février 2016 07:43
Trangam-piainana : Zaza enim-bolana terena hariana tany anaty farihy
Sahiran-tsaina i Razainamalala Fazila manoloana ny faneren-drafozany azy hanary any anaty farihy ny zanany naterany rehefa nilaozam-badiny izy, nefa tsy manana antom-pivelomana hamelomana ny zanany. Nenjehin’ny eritreriny i Razainamalala Fazila ka tsy sahy nanary ilay zaza, Be Juliano no anarany, fa nandondom-baravarana tany amin’ny sampandraharahan’ny mponina ao Sambava, iandraiketan’i Bosco.
mardi, 16 février 2016 20:18
RIP 122 : Tapaka ny tetezana, mitoka-monina i Soanindrariny sompitry ny paoma
Tapaka tanteraka ny lalan’i Soanindrariny miainga avy ao Antsirabe mihazo an’i Mandray iny. Eo amin’ny PK 12 amin’ny Lalam-paritany faha-122 (RIP 122) miantsinanana iny io tapaka io. Ny talata 16 febroary tamin’ny 6 ora sy sasany maraina, raha ny nambaran’ny mponina no nihotsaka ny tetezana ao amin’ny Fokontany Ambohimandroso.
Tompokolahy Rakotoarisoa Raymond
mardi, 16 février 2016 19:37
Zotra Toamasina- Antsirabe : Mpandeha iray maty tao anaty fiara
Lehilahy iray, Rakotoarisoa Raymond, teraka tamin’ny 1959, nandeha taksiborosy amin’ny zotra Toamasina – Antsirabe, nanao lavalina niainga tany Toamasina ny harivan'ny alatsinainy 15 febroary ary tonga ny talata maraina tao Antsirabe no namoy ny ainy.
dimanche, 14 février 2016 18:27
Ambatofitatra Sambava : Ramatoa iray maty tampoka tao amin’ny biraon’ny Fokontany
Renim-pianakaviana iray no maty tampoka tao amin’ny biraon’ny Fokontany Ambatofitatra, Sambava omaly, raha iny nanaovana famotorana momba ny fitarainana izay nataon’ny mpifanolo-bodirindrina taminy.
dimanche, 14 février 2016 09:05
Sary: Sobika Farafangana
Vondrozo : Mitoka-monina tanteraka
Very fanahy mbola velona no azo ilazana ny mponina any Vondrozo amin’ny faharatsian'ny lalana. Anaovan'ny mpitondra foibe be marenina ny fangatahan'izy ireo ny mba hanamboarana ny lalana hany ka mitoka-monina i Vondrozo noho ny haratsian'ny lalana. Ny Distrikan’i Vondrozo dia Distrika iray amin'ny ilany andrefan'ny faritra Atsimo Atsinanana mifanefitra amin'ny Distrikan’i Ivohibe faritra Ihorombe. Mirefy 650km eo ny lalana mampitohy ireo Kaominina miisa 18 madrafitra Distrikan'i Vondrozo saingy efa tsy afaky ny fiarakodia avokoa eny fa na dia ireny tsy mataho-dalana (4x4) ireny aza. Isan'izany ny RN 27 mampitohy an'i Farafangana-Vondrozo-Ivohibe-Ihosy.
vendredi, 12 février 2016 17:01
Herisetra : Bingo ahiana ho tapaka ny tongotr’i Raissa Marie Floriette
Zazavavy kely taizan’i Nenitoany i Raissa Marie Floriette, taorian’ny nisarahan’ny ray aman-dreniny tamin’ny 2013. Nentin’ilay ramatoa niara-nonina taminy tany Ambalavelona Andrafialava, Distrikan’i Vohémar, ilay zaza taorian’izay. Handray enin-taona amin’ny volana septambra 2016 izy. Misy fery be, vokatry ny ratra, ny tongotra havanana eo ambanin’ny lohalik’i Raissa Marie Floriette. Bingo mihitsy io tongony io, ary manaintaina tsy zakany. Averimberiny fa kapoka tamin’ny botan-kazo kitay, nataon’ny nenitoany mitaiza azy io no nahazoany io fery io, tamin’ny volana desambra 2015 raha nilalao niaraka tamin’ny namany izy.